Ukubuyekezwa kweMicrodrone Smartview VR - Incanyana | Indiza yomuntu wokuqala | Izindaba zamagajethi
Ukuhlaziywa kweMicrodrone Smartview VR
UMiguel Gaton | | drones, Izibuyekezo
Sisebenzise uKhisimusi osondelayo, ezinsukwini ezimbalwa ezizayo esiya kuzo thumela izibuyekezo ezahlukahlukene ze-drone ngaphakathi nangaphandle, njengoba ama-drones ngokuqinisekile ezoba esinye sezipho zezinkanyezi kulo nyaka. Namuhla ukuqala sizokwenza ngeMicrodrone Smartview VR, idrone encane kakhulu elingana kahle entendeni yesandla nokuthi njengoba isici sayo esivelele kunazo zonke sifaka uhlelo lwamavidiyo wesikhathi sangempela oluhambisana nezibuko Izibuko ze-VR Drone Kuzosivumela ukuthi sijabulele isipiliyoni sendiza yomuntu wokuqala we-FPV okuyinto entsha kumadivayisi alobukhulu.
1 Usayizi omncane, ukusebenza okuphezulu
2 Ukuhlolwa okulula nokulula
3 Fly esiteshini futhi nge-smartphone yakho
3.1 Landa uhlelo lokusebenza lwe-iOS
3.2 Landa uhlelo lokusebenza lwe-Android
4 Izibuko ze-VR Drone
5 Ezinye izici zeMicrodrone Smartview VR
6 Umbono woMhleli
7 Izinzuzo nokuqeda
8 Isiphetho seMicrodrone Smartview VR
9 Thenga i-microdrone ye-Smartview VR
Usayizi omncane, ukusebenza okuphezulu
Into yokuqala ongayigqamisa nge-microdone ngosayizi wayo omncane. Nge ngamasentimitha ama-3 kuphela ububanzi Le microdrone encanyana impela kepha ngaphandle kwalokhu iza ifakwe ikhamera encane kakhulu ukuze ikwazi ukuthatha izithombe ezisezingeni futhi jabulela ividiyo ngesikhathi sangempela.
Ngaphezu kwekhamera, le divayisi igqame ngokunye ukusebenza okumbalwa ukuthi yize kujwayelekile kuma-drones ajwayelekile, akuvamile ukuthi kube sebangeni lama-microdrones afana ne inkinobho yokubuyela ekhaya futhi i ukulawula ngokuphelele. Ingxenye yokulawula ngokuphelele ibalulekile kulabo abajwayele ukushayela kuleyo modi yendiza ngenkathi inkinobho yokubuyela ekhaya siyibona kakhulu njenge-anecdote, ngoba akuvamile ukuthi uyisebenzise kwi-microdrone eyenzelwe ukundiza ngaphakathi.
Iphinde ifake i- inkinobho yamandla ukuthi ophephela baqale ukujikeleza nokunye Okwehla, okumele sikugcizelele ukuthi kusebenza kahle impela.
Ukuhlolwa okulula nokulula
El IMicrodrone Smartview VR Kuyithuluzi elilula ngempela ukundiza ngesiteshi, okwenza kube ikakhulukazi ifanele njengesipho sabantu abangenakho okuhlangenwe nakho kwangaphambilini ngokuhlolwa kwe-drones. Iza ifakwe ukuvikelwa okususekayo kophaphalazi okuzoba wusizo kakhulu ngezikhathi zokuqala zendiza, kepha uma usuphethe i-drone sincoma ukuthi uyisuse nokuthi indiza ilula kakhulu futhi imnandi ngaphandle kwayo.
Izipesheli isivinini sezindiza ezimbili, ehamba kancane kubantu abasanda kuqala futhi esheshayo kulabo basebenzisi abangochwepheshe, yize isivinini sesithathu senziwa ngesivinini esingaphansi kwesesithathu esitholakala kwamanye amadivayisi anosayizi ofanayo esiwahlolile futhi avumela indiza kagesi futhi emnandi kakhulu.
Njengoba kujwayelekile, ifaka phakathi i- Imodi ye-stunt yokwenza amaluphu ajwayelekile kanye nama-spins emoyeni.
Fly esiteshini futhi nge-smartphone yakho
I-Smartview VR isilungele ukundiza noma ngabe wena ushayela nesiteshi lokho kungena ebhokisini sengathi uyakuthanda ukulawula kusuka ku-smartphone yakho. Ukushayela nge-smartphone yakho, kufanele nje ufake uhlelo lokusebenza olulandelayo (olutholakalela i-iOS ne-Android), vula i-drone, xhuma i-Wi-Fi ye-smartphone yakho kwi-drone bese uvula uhlelo lokusebenza futhi yilokho.
Ngokwami, sikhetha ukundiza nesidlulisi se-drone uqobo, ngoba umuzwa okhiqizwa ngokuthinta izilawuli awufani nakancane nokukwenza ngesikrini seselula, kepha kulabo basebenzisi abathanda le ndlela yokundiza, le microdrone iyayivumela .
Landa uhlelo lokusebenza lwe-iOS
Landa uhlelo lokusebenza lwe-Android
Umthuthukisi: MARK mai
Izibuko ze-VR Drone
Ukuhlanganiswa kwe-microdrone kanye ne-VR Drone Glasses yilokho okuvumela ukunikela ngomuzwa ohlukile kule divayisi ngokuqhathaniswa nemikhiqizo ebangeni elifanayo. Kumele uxhume i-smartphone yakho ku-drone, chofoza isithonjana esikuvumela ukuthi uhlukanise isikrini kabili, faka i-smartphone kuthileyi lezingilazi futhi usukulungele ukuhamba. hlola i-drone yakho kumuntu wokuqala.
Ividiyo yesikhathi sangempela isebenza kahle impela, kukhona ukubambezeleka okuncane kuvidiyo kepha kuyamukeleka uma sibheka ukuthi iyidrone ebiza kanye nezibuko ngaphansi kuka- € 90 futhi lokho kusisiza ukuthi siqale ukuzama ukuhlolwa kwe-FPV.
Vele, njengoba kuyidivayisi eyenzelwe ukundiza ngaphakathi lapho kunezikhala ezincishisiwe, indiza ye-FPV inconyelwa yona kuphela abashayeli bezindiza abanezinga eliphakathi lokuhlola. Uma okufunayo ukwenza izivivinyo zakho zokuqala kule modi yendiza, sincoma ukuthi uyisebenzise endaweni enkulu yangaphakathi enjengehholo lezemidlalo noma okunjalo ngoba uma kungenjalo kuzoba nzima kakhulu ukungashayi emizuzwaneni yokuqala kusukela umuntu uma ulwazi luyinkimbinkimbi yokulinganisa amabanga kahle futhi wazi ukuthi siyini isimo sedivayisi maqondana nemvelo.
Ezinye izici zeMicrodrone Smartview VR
Idrone ine- Ukuzimela kwezindiza okuyimizuzu engu-6; Ibhethri lingakhokhiswa ngokuxhuma idivaysi kwi-USB esingakwazi ukuyixhuma emandleni noma kukhompyutha, kodwa futhi ngokuzithandela singayilayisha ngesiteshi. Le nketho yesibili inikeza ukukhokhiswa okuhamba kancane futhi ibuye isebenzise amabhethri esiteshi, ngakho-ke ngokunengqondo yakhelwe ukuyikhokhisa kuphela lapho sisemgwaqweni futhi asinayo enye indlela.
Isiteshi sihlinzekwa nge-lectern lapho singabeka khona i-smartphone ukubona ividiyo ngesikhathi sangempela ngenkathi sishayela (uma kwenzeka singafuni ukusebenzisa izingilazi). Futhi inesamukeli esincane sokukwazi ukuhambisa imakhrofoni ekuso ngendlela ethokomele.
Ukubuyekezwa kwe: UMiguel Gaton
Imodi yendiza yomuntu wokuqala enezibuko ze-VR
Izici ezithuthukile ezifana nenkinobho yokufika, ukulawula ngokuphelele nokubuyela ekhaya
Siphuthelwa yisivinini sesithathu esisheshayo
Isiphetho seMicrodrone Smartview VR
Lokhu kuyithuluzi elijabulisayo nelisebenziseka kalula lokulingwa okujwayelekile ngesiteshi noma i-smartphone. Singayisebenzisa nezibuko ukwenza indiza yomuntu wokuqala kepha kuyinketho kuphela kubashayeli bezindiza abanolwazi lwangaphambilini.
Thenga i-microdrone ye-Smartview VR
I-Smartview VR microdrone ibiza u- € 89,90 futhi Singayithenga eJuguetrónica ngokuchofoza lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izibuyekezo » Ukuhlaziywa kweMicrodrone Smartview VR
I-Android 7.0 Nougat ye-Sony Xperia X ne-X Compact
I-Kickass Torrents izalwe kabusha kusuka kusizinda esisha